Naya Post Nepal | बाहिरियो जेलभित्रबाट पलको अर्को भिडियो, पलसँग विहे गर्ने सहमति पछि ब’यान फेरेको भनेपछि के भने ? ( भिडियो सहित)
बाहिरियो जेलभित्रबाट पलको अर्को भिडियो, पलसँग विहे गर्ने सहमति पछि ब’यान फेरेको भनेपछि के भने ? ( भिडियो सहित)
कलाकार पल शाहले कर णी ग रेको आ’रोप लगाउँदै अदालत गएकी बालिकाले अदालतमा ब’यान फेरेकी छन् । तनहुँ जिल्ला अदालतमा आइतबार बालिकाको तर्फबाट बक’पत्र भएको छ । त्यसक्रममा उनले अदालतमा आफूमाथि कर णी नभएको बया न दिएकी छन् ।
उनको पक्षबाट गएका एक वकिलले भने– हो’स्टाइल भइन्, बयान पूरै रेडिमेट दिइरहेकी छन् । आफूलाई पलले कर णी न गरेको भन्दैछिन् । प्रहरीमा दिएको ब’यान पनि होइन भन्दै जे लेखेर दिए त्यहि सारेकी हुँ भनिन् ।
जबकी उनले प्रहरी समक्ष आफूलाई पलले पोखरा, तनहुँ र गैंडाकोटमा गरेर तीनपटक कर णी ग रेको बताएकी थिइन् । एकाएक अहिले सबै उ’क्साहटमा हो भन्दैछिन् । अदालतमा बहस गरेका एक कानून व्यव’सायीका अनुसार, नाबालिग गा यिकाले अदालतसँगको ब’यानमा
प्रहरीले ज’बर्ज’स्ती विभिन्न कागजजातहरुमा ह’स्ताक्षर गर्न ल गाएको बताएकी छन् । नाबालिगले अचानक अदालतमा बयान फेर्नुले उनलाई होस्टाइल बनाइएको आ’शंका गरिएको छ । शा’ हवि’रुद्ध प्रहरीमा जा’हेरी दिएका नाबालिगका बुवाको भने अदा लतमा बकपत्र लिन बाँ’की छ ।
नाबालिगले तनहुँ र नवलपरासी प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी र ब यान दिने क्रममा पल शाहले वि’भिन्न प्र’लोभन देखाएर विभि न्न पटक कर णी ग रेको बताएकी थिइन् । पलले समेत तनहुँ जिल्ला अदालतमा बयानको क्रममा आफू म’दि’रा पि’ए’र बि’ य’रको बोतल लिएर नाबालिगको कोठामा गएको स्वी’कार ग रेका थिए ।
तर, नाबालिगले नै बयान हेरेपछि यो मुद्दा कमजोर बनेको छ । नाबालिगले तनहुँ प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएपछि प्रहरीले शाहविरुद्ध प”क्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो । गत फागुन १५ गते शाह स्वयं प्रहरीसमक्ष उपस्थित भएका थिए ।
नाबालिगका बुबाले ११ फागुनमा तनहुँ र फागुन १५ गते नवल परासीको प्रहरी कार्यालयमा शाहवि’रुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए । पल शाह अहिले अदालतको आदेशमा पुर्पक्षका लागि जिल्ला कारागार, तनहुँमा छन् ।
२०७९ बैशाख ६, मंगलवार प्रकाशित 1 Minute 1181 Views